"Gbanwee" ihe bụ Mac ugbu a bụ iPhone | Esi m mac
"Gbanwee" ihe bụ Mac ugbu a bụ iPhone
O nwere ike iyi ihe ochie ma ọ bụ ọbụlagodi ụfọdụ nwere ike ghara ịma ihe anyị na-ekwu maka ya, mana «switcher» nke doro anya sitere n'okwu ahụ bụ «Gbanwee» bụ nwa oge gara aga ndị ọrụ ahụ si na kọmputa nwere Windows sistemụ arụmọrụ gaa na otu nwere macOS. Nke a na ọtụtụ n'ime ndị nọ ugbu a nwere ike ọ gaghị amata bụ ihe ejiri maka onye anyị bụ - ana m etinye onwe m n'ihi na m bịara Mac na ndị nrụpụta Intel na kọmputa - ihe ọhụrụ maka sistemụ arụmọrụ Mac n'anya ndị mbụ ahụ kọmpụta Apple ndị lụrụ ọgụ na ngwa ole na ole ma sie ike na ha nwere n'oge ndị ahụ ma e jiri ya tụnyere kọmputa ndị ọzọ.
N'otu ụzọ ahụ ụlọ ọrụ Cupertino ji okwu ahụ Gbanwee maka ndị ọrụ ahụ bịara Mac na ndị chọrọ enyemaka ụfọdụ iji kwado usoro sistemụ nke ụmụ Cupertino na mkpọsa dịka akụkọ ifo dị ka "Get a Mac" gụnyere, ugbu a ọ dị eji maka ndị ọrụ na-esite na gam akporo iji nọrọ na iOS. Apple tinyere mkpọsa a ogologo oge gara aga na otu mmelite na weebụsaịtị ụlọ ọrụ yana ugbu a ọ na-arụ ọrụ ọzọ maka gam akporo na iOS switchers.
Na weebụ anyị na-achọta ngalaba a nọ n'ọrụ ugbu a Ọzọ na bekee, ee, mana ọ ghọrọ ebe nchekwa na otu n’ime mmegharị nke gosipụtara ngbanwe Apple n’agaghị n’ihu n’akụkụ ngwaahịa ahụ nwere ọtụtụ mmepụta, iPhone. Ya mere, anyị na-eche ihu ụdị nnyefe nke ike n'etiti Macs na iPhones nke ka na-adọrọ mmasị maka onye ọ bụla na nke na-eduga ụfọdụ n'ime anyị na mbido anyị na nke a nke Macs na Apple n'ozuzu. Ibu a switcher kwa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » "Gbanwee" ihe bụ Mac ugbu a bụ iPhone
Akwụ ụgwọla Apple Pay na Visa maka ịda iwu patent
Dekọọ ma hazie ncheta olu gị na Aura